2020 မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားမိုဘိုင်းဂိမ်း - အမြတ်အစွန်းငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ. အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီရို.
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » 2020 မြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားမိုဘိုင်းဂိမ်း
ငါးဖမ်း Arcade ဂိမ်း Ocean ဘုရင်3Plus အား Raging မီး
ငါးမုဆိုး Game Ocean3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ
Fish Shooting ဂိမ်းဆော့ဝဲလ် Ocean King3Plus အား Blackbeard ရဲ့ Fury
ငါးဂိမ်းလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Phoenix ၏ Legend Plus
ငါးဖမ်းဂိမ်းများ Ocean King3Plus အား Aquaman ဘုံ
ငါးဖမ်းမုဆိုးဂိမ်း Ocean3 Plus အားမီးသတ် Phoenix
ငါးဂိမ်းစားပွဲတင်လောင်းကစားသမုဒ္ဒရာရှငျဘုရငျ3Thanos Avenger များ
IGS Arcade ငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ Ocean King3ရတနာ၏ Plus အားနဂါးသမ္မတကတော်
1. ထက်ပိုပြီး 50+ တောက်ပသောဂိမ်း
2. မြင့်မားသောအမြတ်လောင်းကစားဂိမ်း & အွန်လိုင်း Grand Jackpot ကိုမျှဝေပါ
3. 10000+ ကစားသမားများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အွန်လိုင်းရှိနေသည်
သင်အကြိုက်ဆုံးကာစီနိုဂိမ်းများ - အစဉ်သွား!
သင်အကြိုက်ဆုံး Arcade တွင်တွေ့ရသောရိုးရာငါးဂိမ်းစားပွဲများကိုသင်နှစ်သက်သည်. ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းကိုပြောရင်ကော, သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငါးစားပွဲကစားနည်းများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်? အဆင်ပြေအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ, မရပ်မနားပျော်စရာ! V-power App သည်ငါး / ဆော့ကစားခြင်းဂိမ်းများကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုရန်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းကိုပေးထားသည်, ဘယ်နေရာမဆို. သငျသညျ avid ငါး / slot ဂိမ်းကစားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်၏နေရာမှာငါး / slot ဂိမ်းစားပွဲပေါ်မှာပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ, အိမ်တွင်ကစားရန်သို့မဟုတ်သင်၏ Arcade guests ည့်သည်များအားသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုကစားရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အဆင်ပြေမည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။.
The V- ပါဝါ အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကစားသမားများအားဒေသခံ Arcade တွင်သူတို့အကြိုက်ဆုံးငါးဂိမ်းကစားခြင်းမှရရှိသောတူညီသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖန်တီးရန်ဖန်တီးထားသည်, အချိန်မရွေးကစားနိုင်ခြင်း၏ထပ်တိုးအဆင်ပြေမှုဖြင့်သာ, ဘယ်နေရာမဆို. The V- ပါဝါ အက်ပလီကေးရှင်းကို IOS ရော Android ကိရိယာနှစ်ခုလုံးတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်. အခြားအွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်စွာယှဉ်ပြိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအခါတိုင်းသင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှကစားပါ။ သင်ရရှိသောစွမ်းရည်များကိုပြသပါ!
အဆင့် 1: ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ပါ (https://www.vmight.xyz/#/download/index) သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်ရှိအင်တာနက်ဘရောက်ဇာနှင့်အတူ (iPhone, iPad, Android).
“ DOWNLOAD” ဆိုသည့်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
“ click install” ကိုရွေးပါ.
“ ထည့်သွင်းပါ” ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ဖုန်း၏ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီး“ Device Management” ဖွင့်ပါ။
Shenzhen Foresight ကိုရွေးချယ်ပြီး“ Trust” ကိုရွေးချယ်ပါ။
“ DOWNLOAD” ကိုနှိပ်ပါ။
V-power.apk ကို Install လုပ်ပါ.
အဆင့် 2: သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်ရှိ V-power အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ လော့အင်ဝင်ရန်သင်၏သုံးစွဲသူ ID နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပါ.
အဆင့် 3: V-power App နှင့်အတူအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစားခြင်း၌ပျော်မွေ့ပါ!
မေး: ကျွန်ုပ် TAS မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းဘုတ်ကိုတီထွင်နိုင်ပါသလား?
က: ဟုတ်တယ်! TAS သည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်. ရိုးရှင်းစွာအကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်. ဖွံ့ဖြိုးမှုရွေးချယ်စရာများနှင့်ဆက်စပ်နိမ့်ဆုံးအမိန့်အရေအတွက်ရှိပါတယ်. လောင်းကစားဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
က: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနောက်ကွယ်တွင်ရပ်တည်ပြီးထုတ်လုပ်သူ၏ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ချွတ်ယွင်းသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆိုပြန်လည်ပြုပြင်မည်. အာမခံမေးခွန်းများနှင့်အတူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်သောအခါ, ကျေးဇူးပြု၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီး ၀ ယ်ရက်စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်ပါပြီ. အဆိုပါဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့: 12 ဝယ်ယူသည့် နေ့မှစ၍ တစ်လအာမခံ.
မေး: အဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပျက်ကွက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်? ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်မည်မျှကြာမည်နည်း?
က: အကယ်၍ ၎င်းသည်အာမခံကာလအတွင်းဖြစ်ပြီးပျက်စီးမှုသည်လူမဟုတ်သောအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်သူကအာမခံခံစားခွင့်များအတွက်ခံစားခွင့်ရှိသည်. ဒါကြောင့်အာမခံကာလထက်ပိုပါက, ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါမည်. ငါတို့ကိုပေးပါ 3-7 ပြုပြင်ရန်အလုပ်ရက်များ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်ဖယ်ထုတ်).
က: ၀ ယ်သည့်အခါပူးတွဲပါရှိသောထုတ်ကုန်လက်စွဲနှင့်ဝါယာကြိုးညွှန်ကြားချက်ကိုသင်ကိုးကားနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းအကူအညီများကိုအမြဲတမ်းပေးလိမ့်မည်.
ငါးဖမ်း Arcade ဂိမ်းအမြတ်အစွန်း Kylin မိုးကြိုး
ငါးဂိမ်းလောင်းကစားသမုဒ္ဒရာဘုရင်က3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး
လောင်းကစားစက် IGS အားဖြင့်အဖုံး
Aristocrat အားဖြင့်လောင်းကစား slot တွေပျော်ရွှင်သောမီးအိမ်
လိပ်စာ: A1201, Heng Ran Creative Park, Shixin လမ်း, ပန်ьюခရိုင်, ကွမ်ကျိုး, တရုတ်
ဖုန်း: +86 13543475292
Guangzhou အချိန် - အာကာသကာတွန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ, Ltd. © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ